Xafladii IIFA – Ee Lagu Qabtay Magaalada New York Iyo Maqaal Ay Shabakada Boxoffice India Kasoo Qortay | Filimside –	Monday, July 24th, 2017	" alt="Filimside - logo" border="0" />
Xafladii IIFA – Ee Lagu Qabtay Magaalada New York Iyo Maqaal Ay Shabakada Boxoffice India Kasoo Qortay
Jul 17, 2017 - 6 Jawaabood	Waxaa Qoray: Zakarie Abdi Taariikh: July 17, 2017:
Shabakada Boxoffice India waxay dhaliil weyn usoo jeedisay qaabkii loo qabtay loona diyaariyay xafladii weyneed IIFA (International Indian Film Awards) ee lagu qabtay magaalada New York ee dalka Mareekanka.
Hadaba Boxoffice India maqaalka ay xafladii IIFA 2017 ka qortay fadlan hoos kaga bogo asigoo Af Soomaali ku turjumay waxaana kuu sahashay shabakada Filimside:
Abaal marinada Hindiya laga bixiyo waa kaftan ah sida ay dunida ka warqabto laakiin xafladii IIFA waxay ahayd mid qurun badan sidoo kalena lagu tilmaamo xafladii abaal marin ee ugu xumeyd.
Waa macquul inay u arkaan inay tahay xaflad dunida oo idil loogu tala galay madaama sanad walbo meel Hindiya ka baxsan lagu qabto, laakiin shabakada Boxoffice India waxay ka aamusi weesay filimada ay gudiga IIFA 2017 usoo xusheen inay u tartamaan abaal marinta filimka ugu wanaagsan (Best Filim).
Waxaa la dhihi karaa kaftan ma ahan ee waa duleysi in filimadaan ay u tartamaan abaal marinta filimka ugu wanaagsan (Best Filim):
Waxaa la sheegay in filimada sare ee u tartameen abaal marinta filimka ugu wanaagsan in codeyn Internet-ka ka dhacday oo dunida ka qayb qaadatay in lagu soo xushay.
Laakiin arinkaas waa wax lagu madaama kuwa kaftanka jecel ay isku dayayaan inay naga dhaadhiciyaan in filimka Dangal xitaa cod ku heli waayay inuu tartamayaasha filimka ugu wanaagsan ka mid noqdo sidoo kalena Airlift isagana wax cod ah heli waayo.
Laakiin caqligeena ayaa lagu cayaarayaa markii la dhaho Dangal iyo Airlift wax cod ah wey waayeen bale waxaa cod heleen filimada Udta Punjab, Neerja iyo Pink!
Waa macquul in atoorayaasha qaar aysan rabin inay xafladaha abaal marinta ka qayb galaan ama aqbalaan, balse shirkad ahaan kuwa abaal marinada bixiyaan waxaa u wanaagsan filimada iyo jilaayaasha u qalmaan abaal marinta inay soo xushaan waayo muhiim ah ma ahan in jilaaga biladaada aqbalo balse waxaa muhiim ah sumcadna ku jirtaa inaad u qirtid mudnaanta ay leeyihiin kuwa sanad walbo filimada ugu wanaagsan la imaadaan.
Waa run fanka Hindiya sanad walbo inay soo saaraan filimo fariin ahaan xun laakiin fanka waxaa kasii liito oo xaalad bur bur ah ku sugan kuwa abaal marinada bixiyaan iyo kuwa filimada falan qeeyaan madaama ay wax been abuur ah dadka ka gadaan ama la wadaagaan.
Xaqiiqdii filimo aan u qalmin ayaa sanad walbo abaal marin la siiyaa sidoo kalena filimo aad u xun sheeko ahaan ayay kuwa filimada ka faaloodaan siiyaan dhibco badan si dadka loo qaldo!
Balse dhibaatada ugu weyn iyo hagardaamada waxaa wadaan kuwa filimada naqdiyaan oo ka iibiyaan shirkadaha abaal marinada bixiyaan inay biladahooda siiyaan filimo aad u liitaan sheeko ahaan ganacsi ahaana bur bureen.
Sidaa darteed wax walbo waa lagu cayaaray madaama filimo aan abaal marin u qalmin la siiyo sidoo kalena filimo sheeko ahaan liitaana la siiyo xidigo badan ayadoo laga dhigaayo in fariintooda wanaagsan tahay.
Nidaamka saxda ah wuxuu yahay filimkii wanaagsan Boxoffice-ka ayuu ka gadmaa daawadayaashana wuu soo jiitaa, waxaana laga rabaa kuwa filimada falan qeeyaan marin habaabinta inay joojiyaan sidoo kalena kuwa abaal marinada bixiyaana ay fanka u cadaalad falaan!!
Waxaa Aqriyay: 908
HaMze ZizoU says:	July 17, 2017 at 1:49 pm	Ugu danbayn waad soo daabacdeen Abaal marinada india waa iska kaftan iyo khiyaali hase ahaatee mida iifa waa ta ugu sii xun Lol waa runteed wllhi hindiya flimadeeda waxyaabahaan ku nacay bay ka mid tahay
New-king-AAMIR-KHAN says:	July 17, 2017 at 2:07 pm	Cawr ayadee ma qalbigay-gey-ku jireen
Shalay mar-kaan-akhriyay-guuleystayaasha-IIFA-AYAAN FAJAC IYO AMAGAAG LA dhacay
Aliabat-iyo-shahid-kapoor ayaa Ku kuu leystay aktar-ka iyo-atariishada u wanaagsan sanad-ka oo at Ku qaateen filima-ka UDTA-PUNJAP filim-ka lava heel
Moha says:	July 17, 2017 at 2:36 pm	zakarie abdi slmulah zxp
muqdishona waan maqlay in qadka loosoo daayay
Zakarie Abdi says:	July 17, 2017 at 2:39 pm	Sidoo kale salaan sare sxb mahad sanid
Wadani says:	July 17, 2017 at 3:36 pm	Run iyo beenba anaga madadaalo ahan filmkii na cajabiya inan ku raaxaysano aya noo muhiim ah. Abaal marin kii qaata iyo kii loo diido iyagay u taallaa. Maxaa la isku wareerinaa shirkadaanaa bilad saxan shirkadana waa beenteed sheeko khiyaali ayan u arkaa. Akhristayaasha Somalida Boqol jeer hadii filim lagu qaato abaalmarin kii ay iyagu ka heleen bas aa la fiican. Muhiimaduna waa qofkasta kii qamciyay aya la fiican. Yaan Lasii raacraacin sheekada ah Shirkadaas waa runteed shirkaadaasna waa beenteed………….hindiya kulligood ayaba iska beenaalayaal ah macal aflaamtooda khiyaaliga ah.
cadnaan says:	July 17, 2017 at 6:19 pm	waa saantahay sxb